UPDATE: Al-Shabaab oo la wareegay Saldhigyo ay ka baxeen ciidamada DF Soomaaliya! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Al-Shabaab oo la wareegay Saldhigyo ay ka baxeen ciidamada DF Soomaaliya!
UPDATE: Al-Shabaab oo la wareegay Saldhigyo ay ka baxeen ciidamada DF Soomaaliya!
Sh/Dhexe (Halqaran.com) – Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay la wareegeen gacan ku haynta Saldhigyo Ciidamada dowladda ay baneeyeen oo ku yaallo Gobolka Shabellaha dhexe.
Saldhigyada Ciidamada dowladda ay ka baxeen ayaa la sheegay inay kala yihiin Ceelka geeloow iyo Raaxooy oo ku dhow deegaanka Qalimow.
Lama oga sabab rasmi ah oo ku aadan Ciidamada deeganadaasi, isaga baxay, balse Al-Shabaab ayaa sheegtay inay la wareegeen gacan ku haynta deeganadaasi.
Warbaahinta ku hadasha Afka maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay sheegeen ciidamada deeganadaasi baneeyay inay uga baxeen halkaas cabsi ay ka qabaan weeraro kaga yimaada ururka Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa culeys Militari oo xoog leh waxa ay saareen deegaanada Gobolka Shabellaha dhexe oo dhawr mar ay ku dileen masuuliyiin iyo Ciidan badan.
saldhigyada ciidamada dowladda